Chinatown#YOKOHAMASTADIUM#6ppl #Ishikawacho sta. - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAkhotel
Isikhululo esikufutshane seJR Ishikawacho Station singaphakathi kwemizuzu emi-4 yokuhamba, ukusuka apho ungafika ngokulula eTokyo, eGinza, eAsakusa, eShibuya, eShinjuku, eDisneyland, eKamakura nase-Enoshima!
Kwaye, i-Yokohama Mirai Port, i-Yokohama Landmark Building kunye ne-Yokohama International Peace Conference Hall nazo ziyafikeleleka ukusuka apha. Kwaye ungafika kwisikhululo seenqwelomoya saseHaneda ngebhasi engamisiyo kwimizuzu engama-40.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala efanelekileyo kwaye ezolileyo enendawo efanelekileyo yendalo apho ifikeleleka kuzo zombini iYokohama Chinatown ngaphakathi kwemizuzu emi-4 yokuhamba kunye neSitishi sase-Ishikawachō ngaphakathi kwemizuzu eli-9 yokuhamba, ukuze ibe yindawo efanelekileyo yohambo lwakho oluhle eTokyo. . Ngaphezulu, ngohambo lwemizuzu eli-10 ungafikelela eYokohama Stadium (malunga ne-200 m), Yamashita Park, Motomachi Shopping Street, Isesaki Shopping Centre (Isomo Shopping Mall), kunye namanye amaziko olawulo. Lilonke, le ndawo iyafikeleleka phantse kuzo zonke iindawo ezidumileyo neziluncedo kumgama wokuhamba, ezinokukunika ubomi obulula kakhulu. Ukongeza, malunga neSikhululo saseMotomachi-Chūkagai esihamba ngemizuzu eyi-9, iintlobo zeendawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, iivenkile zekofu kunye neevenkile zeziyobisi ziyafumaneka. Ukusuka kule ndawo igqibeleleyo, ungaya naphi na ngaphakathi kwesi sixeko ukuze ufumane inkcubeko yaseJapan. Kukho iibhedi ezi-2 zomntu omnye kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini, ukuze ikwazi ukuhlalisa abantu aba-4. Ndiyathemba unokuba nexesha elimnandi lokuhlala kule ndlu kwaye ukonwabele uhambo lwakho njengokuhlala ekhaya.
Ukuba ungathanda ukwazi ezinye iinkcukacha malunga nale ndlu, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam nanini na, uya kuhlala wamkelekile!
Iivenkile eziluncedo kunye neevenkile ezinkulu zinokufika kumgama oziimitha ezingama-50.
Ucango oluphambili lwegumbi lusetiwe njengesitshixo esilumkileyo, unokuvula nje ucango ngekhowudi yokhuseleko endikunike yona xa ubhukisha uqinisekisa.
Igumbi liyilwe kwaye lihonjiswe kusetyenziswa ingcamango yoyilo lwangoku kunye nomoya ophucukileyo wokuhlobisa kwangaphakathi.
Kwaye, iintlobo ngeentlobo zezixhobo kubomi bakho bemihla ngemihla, kubandakanya ikhitshi elisisiseko, i-smart TV, umatshini wokuhlamba, ifriji, isomisi seenwele, intsimbi, njl. njl., kunye nebhedi ethile yehotele, i-Intanethi engenazingcingo enesantya esiphezulu, izinto zokuthambisa umoya, isixhobo sokukhupha amanzi. nazo zilungiswe kakuhle kule ndlu. Ndiyilungisile indlu kangangoko ndinako ukuze wenze ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi.
Le ndlu icetyiswa kakhulu kwiiholide zezibini, abahlobo, usapho, kunye ne-ladybros okanye kubahambi beshishini abaya kuba nokuhlala ixesha elide.
Ukuba unomdla kule ndlu okanye ungathanda ukwazi iinkcukacha ezithe vetshe, nceda uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha ^ _ ^
4.85 · Izimvo eziyi-98
zokutyela:Yokohama Chinatown　1 imiz ukuhamba
金香楼(Indawo yokutyela yamaTshayina) 2 imiz ukuhamba
萬珍樓　2 imiz ukuhamba
聘珍楼　3 imiz ukuhamba
ivenkile yekofu:Cafe168 1 imiz ukuhamba
Ivenkile enkulu: マイバスケット 1 min uhambahamba
ivenkile eluncedo: ファミリーマート(FamilyMart)umzu oyi-1 uhamba
ikhemesti: ドラッグストア　マツモトキヨシ 4 imiz uhamba
Umbuki zindwendwe ngu- Akhotel
-Inokuba ndingakwazi ukudibana nendwendwe ngqo kuba ndinomsebenzi. Ndingavuya ukuba xa sinokudibana ngokobuqu size siphuze ikofu kunye (ukuba ixesha liyavuma).
-Ndazise ukuba kukho enye into eyimfuneko! Ndingavuya ngakumbi ukulungiselela yonke into oyifunayo kangangoko ndinako.
-Uya kukwazi ukunxibelelana nam ngoncedo olungaphezulu ngexesha lokuhlala kwakho. Iinkcukacha zam zoqhagamshelwano zibandakanyiwe kumyalelo weendwendwe kuwe nje ukuba ugcino luqinisekisiwe.Ndiyakwazi ukuthetha isiNgesi, isiTshayina, nesiJapani. Nceda undithumelele imiyalezo ngo-Airbnb kwaye ndiza kuzama ukuphendula ngokukhawuleza.
Inombolo yomthetho: M140024380